तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ कार हरेक चौथो रूसी नागरिक वा प्रत्येक दोस्रो परिवार अहिले। कार लागि खर्च सधैं तलब एक पर्याप्त भाग खान। त्यसैले, यो कसरी कार मा इन्धन बचत गर्न सिक्न महत्त्वपूर्ण छ। तल सुझावहरू प्रयोग गर्नुहोस्। र चाँडै तपाईं धेरै कम सामान्य छ कि ग्याँस स्टेशन मा कल गर्न थाले नोटिस हुनेछ।
मिसिन को अवस्था जाँच
नियमित हावा फिल्टर जाँच गर्नुहोस्। यो फोहोर छ भने, यो इन्जिन र वृद्धि गर्ने हावा को पहुँच सीमित इन्धन खपत। म कसरी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ? एक उज्ज्वल दीपक गर्न फिल्टर पकड। यदि प्रकाश जान्छ, त्यसपछि सबै कुरा ठीक छ। भने, त्यसपछि यसलाई प्रतिस्थापन गर्न समय।
तेल को चयन
थाहा मानिसहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्न कार मा इन्धन, लामो इन्धन खपत तेल गुणस्तर र स्थिरता प्रभावित छ भन्ने तथ्यलाई सजग छ। मिसिन को इन्जिन पेट्रोल र हवाई एक मिश्रण मा चल्छ। यो मिश्रण जलाइएको छ, यो इन्जिन पिस्टन र अन्य भागहरु सुरु हुन्छ। त्यहाँ आफ्नो प्रतिरोध आन्दोलन संग। के थप छ, थप ऊर्जा आवश्यक छ, र यसैले इन्धन।
मोटर तेल इन्जिन सबै भागहरु lubricates, तर यो फरक चिपचिपाहट हुन सक्छ। साना यो छ, सजिलो भएको सार्दा भागहरु र कम इन्धन खपत। र विपरित। तर, इन्जिन तेल छानेर, यो आवश्यक खाता अन्य मापदण्डहरु (वर्ष को समय, वारंटी अवस्था, मेशिन को उमेर, र यति मा। डी) ले छ।
तपाईं कतै जाने अघि, जाँच गर्न निश्चित हुन दबाब टायर। यो पनि इन्धन खपत असर गर्छ। 0.3 पट्टी को क्षेत्र मा आदर्श देखि अनुज्ञेय विचलन।
कसरी कार मा इन्धन बचत गर्न चिन्ने चालक, गति भन्दा बढी छैन। सबै, लामो-ज्ञात तथ्य पछि: अधिक इन्जिन गति हावा उच्च यो छ। यो अतिरिक्त इन्धन खपत आवश्यक छ।
अर्को टिप - thoughtfully ग्याँस पेडल थिच्नुहोस्। अचानक सुरु वा इन्जिन सिलिन्डरहरु मा गोठ धेरै पेट्रोल जाने भने। कम गति उच्च गियर मा बारी छैन। अर्कोतर्फ, यो tachometer सुई 2500-3000 RPM लागि पाउँछ भने, प्रसारण सरेका गर्नुपर्छ।
को काग फस्न छैन: प्रयास गर्नुहोस्। यो भीड घण्टा चालक ब्रेक गर्न धेरै बाध्य छन् र अक्सर सुरु छ।
हामीलाई ड्राइव र सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ थप एक टिप दिन गरौं। अग्रिम ट्राफिक बत्ती ब्रेक आउँदै गर्दा कार हरियो एउटा न्यूनतम गति स्विचन संकेत थियो भनेर। किन यसो गर्न छ? एक स्थिर कार budge गर्न किनभने, यो एउटा न्यूनतम गति मा यात्रा थियो भने भन्दा, धेरै ऊर्जा (इन्धन) आवश्यक हुनेछ।
वातानुकूलन काम - यो इन्धन अर्थव्यवस्था अर्को शत्रु हो। पेट्रोल को खपत 5-20% वृद्धि। "ठीक छ, कसरी वातानुकूलन बिना विशेष गरी गर्मी मा गर्छन, केही भन्न? आखिर, यो तातो हुनेछ। " हो, यो, तर इन्धन ट्यांक लगभग हुँदा रहने छैन यो भर्ने प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ। खैर, कुनै पनि वैकल्पिक उपकरण समावेश छ असर पेट्रोल को खपत (ओवन, कुहिरो रोशनी, रेडियो र यति मा। डी)।
इन्धन कसरी सुरक्षित गर्न? ट्युनिङ को समय मा दिनुहोस्। उदाहरणका लागि, व्यापक पाङ्ग्रा भएको aerodynamic तानेर वृद्धि। यो बारी मा इन्धन खपत बढ्छ।
कार खरीद योजना को चरण मा सानो आकारको संस्करण हेर्न। कार वजन साना, कम ऊर्जा यसको विसर्जन लागि आवश्यक छ। तपाईंले पहिले नै एक कार छ भने, लिनुहोस् ट्रंक मा superfluous र भारी केही राख्नु छैन ख्याल।
इन्धन को प्रकारको
इन्धन कसरी सुरक्षित गर्न चिन्नेहरू, "VAZ", कि पेट्रोल खपत गर्दा पुरानो कार ड्राइभिङ भन्दा धेरै कम छ पुष्टि गर्नुहोस्। यसलाई बुझ्ने छ - मालिकको आफ्नो सस्तो इन्धन अभ्क तेल हाल्नु धेरै दु: खी छैन। नयाँ कार इन्धन को गुणस्तर र उच्च octane नम्बर, राम्रो गर्न थप .मांग छ।
कार हावा प्रवाह थप प्रतिरोध सिर्जना प्रवेश देखि, बन्द खिडकियों ड्राइभमा प्रयास गर्नुहोस्। यस सन्दर्भमा, इन्जिन अतिरिक्त इन्धन आवश्यक छ।
इन्जिन को मात्रा र अश्वशक्ति
खैर, यहाँ सरल छ: उच्च यी संख्या, अधिक voracious आफ्नो फलाम घोडा प्राप्त।
गियरबक्सलाई एक विभिन्नता
धेरै साईट मोटर चालकहरुलाई आग्रह गर्दै: केही "कसरी मिसिन मा इन्धन बचत गर्न?"। यो उभिए मेकानिक्स छ राम्रो छ। यो automatics भन्दा 10-15% कम इन्धन खपत।
यो इन्धन लागत कम गर्न सबैभन्दा मूल माध्यम मध्ये एक छ। त्यसैले यो स्थापना गर्न अल्छी हुन छैन। निस्सन्देह, ग्याँस एक बिट पेट्रोल भन्दा छिटो पुग्छन्, तर यो आधा मूल्य लागत।
मात्र नकारात्मक - को सामान खण्ड को क्षमता कम (बेलुन माथि लगभग आधा ठाउँ लिन्छ)। पछि पनि ग्याँस मिसिन कार्यका केही हप्ता ढिलो हुन्छ। यो धेरै गाह्रो गति र लामो sprints प्राप्त छ।
लामो यात्राको मा, योजना कार प्रयोग
यसको सार नातेदार, साथी वा छिमेकी लामो यात्राको समयमा सबै पेट्रोल लागत साझेदारी गर्न भन्ने तथ्यलाई मा निहित। खैर, तपाईं काम मा आफ्नो सहयोगिहरु ड्राइभिङ, यो सर्किट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
जाडो लागि इन्जिन ढाक्नु
यो मेशिन अब यो बिताउनुहुन्छ अधिक इन्धन अप वार्मिंग छ। त्यसैले, ती मोटर चालकहरुलाई इन्धन कसरी सुरक्षित गर्न चिन्ने, इन्जिन आवश्यक पृथक कंबल, महसुस, आदि darnitom
यसलाई सधैं प्रभावकारी र सुरक्षित छ। विशेष सवारीसाधान कंबल को आगमन संग तर सबै कि परिवर्तन भयो। तिनीहरूले आगो प्रतिरोधी सामाग्री समय लामो अवधिको लागि गर्मी राख्ने भनेर समावेश। तिनीहरूलाई धन्यवाद, इन्जिन तपाईं एक समय को लागि कतै आउन गर्दा जो अवस्थामा धेरै उपयोगी छ, ठंडा तल अब।
हिउँदमा, मोटर चालकहरुलाई अक्सर इन्जिन माथि न्यानो छ। आखिर, लामो समय को लागि मिसिन चिसो उभिएर भने, त्यसपछि यसलाई बनाउन कठिन हुनेछ। हो, र मोटर धेरै नकारात्मक असर गर्न सक्षम छ।
अधिक अक्सर हामी पूरा अप वार्मिंग, अधिक इन्धन खपत भएको छ। निस्सन्देह, माथि-उल्लेख कार कम्बल - यो राम्रो, तर त्यहाँ राम्रो विकल्प छ - एक विशेष प्रदर्शन। अब बजार धेरै मोडेल छन्। तिनीहरूलाई को भन्दा नेटवर्कमा काम, तर त्यहाँ उन्नत अडान-एक्लै विकल्प छन्। तिनीहरूले अधिक महंगा छन्, तर यो खरिद गर्न हामी तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्छौं।
कसरी कार मा इन्धन बचत गर्न जान्न चाहनुहुन्छ? जवाफ सरल छ: मूल्यहरु हेर्नुहोस्। सबैलाई बानी छ। यो अवस्था, एउटै सामाग्री को यात्रा को सन्दर्भमा। र यो सधैं वित्त लागि लाभदायक छ। अन्य ग्यास स्टेशन मा मूल्यहरु पत्ता र एउटा चयन जहाँ लागत र गुणस्तर सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट अनुपात।
अब ग्यास स्टेशन मा, धेरै मार्केटिङ टुक्रा छन्। तिनीहरूलाई को एक बोनस कार्यक्रम छ। जब तपाईं एक ठूलो रकम अभ्क तेल हाल्नु, बोनस कार्ड एक इनाम को रूपमा जारी छ। उनको बोनस लागि इन्धन को पछि खरिद संग।
यो स्पष्ट उदाहरण दिन बनाउने। तपाईं 900 rubles को लागि को पेट्रोल 30 लिटर भरिएको छ। बोनस कार्डमा तपाईं 30 अंक, 30 rubles कुन, वास्तवमा, बराबर स्कोर। एक पटक तपाईं 900 अंक जम्मा गरेको छ, तपाईं इन्धन 30 लिटर लागि तिनीहरूलाई आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले बोनस कार्ड प्रयोग र कसरी "UAZ" वा अन्य कुनै पनि कार मा इन्धन बचत गर्न विचार छैन।
एक प्रश्न बारे चिन्तित क्षण, धेरै साईट र अनुभव कार मालिक मा: "कसरी चुम्बक संग कार मा इन्धन बचत गर्न र यसलाई साँच्चै मदत गर्छ?" सामना गरौं।
यो चुम्बक को इन्धन लाइन संलग्न छ। यस जब विक्रेता को आश्वासन डिजेल वा पेट्रोल ह्यान्डहेल्डमा उपकरण द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र मार्फत बित्दै, ईंन्धन अणु आदेश र छरिएका छन्। यो combustibility बढाउँछ र यसका powerplant 10-30% कम खपत। गरेको विशेषज्ञहरु यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ पत्ता गरौं।
धेरै वर्ष पहिले, एक जर्मन सार्वजनिक संगठन ADAC को चुम्बक स्वतन्त्र परीक्षण सञ्चालन। यो कि पेट्रोल खपत पनि एक प्रतिशत कम छैन बाहिर गरियो। शोधकर्ताओं बताए: गर्मी मूल्य कुनै कुरा चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा आन्दोलन को के अर्डर परिभाषित गरिएको छ कार्बन र हाइड्रोजन परमाणु सिधै निर्भर छ किनभने यो संयन्त्र, सिद्धान्त काम गर्न सक्दैन। कि, इन्धन संरचना परिवर्तन गरिएको छैन, र यो राम्रो हुन त्यसैले बाल्न। को सिलेंडर मा इन्धन को संरचना परिवर्तन गर्दा मोटर को विशेषताहरु मात्र परिवर्तन हुनेछ।
आफै मा, इन्धन बाल्न सक्छ, त्यसैले यो एक oxidizing एजेन्ट (अक्सिजन) कडाई परिभाषित अनुपात मा संग मिश्रित छ। यो प्रक्रिया आन्तरिक दहन इन्जिन हुन्छ। मिश्रण प्रति हावा को 15 किलो पेट्रोल वाष्प को 1 किलो को एक अनुपात संग सामान्य मानिन्छ। यस मामला मा राम्रो इन्धन अर्थव्यवस्था र उच्च शक्ति एकाइ प्रदान गर्दछ। अक्सिजन मा एक कमी संग, यो मिश्रण जो 15-20% द्वारा वाहन गरेको क्षमता बढ्छ, पेट्रोल संग समृद्ध छ र सिलेंडर मा जलाए धेरै छिटो छ। तर यस मामला मा, इन्धन खपत ठूलो हुन्छ, र यसैले, कुनै कुनै इन्धन अर्थव्यवस्था कुरा छैन। , यो यो हासिल गर्न इन्धन मिश्रण मा हावा को प्रवाह वृद्धि गर्न आवश्यक छ। यो केवल 8-10% द्वारा न्यूनतम शक्ति को हानि इन्धन खपत कम हुनेछ। यो चुम्बक छैन इन्धन कुनै पनि प्रभाव पार्छन् गर्न सक्षम छ कि पूर्वोक्त देखि निम्नानुसार।
त्यसैले, धेरै-hyped र पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रोत्साहित र यस लेखमा अन्य सुझावहरू प्रयोग गर्न बाटो व्यर्थमा बारेमा बिर्सन्छन्।
ईंन्धन भुक्तानी गर्न एक प्लास्टिक कार्ड छ
दुर्भाग्यवश, यो विधि सबैतिर काम गर्दैन, तर यो भन्नेछु बारेमा हामी मतलब छैन। निम्न को सार। अब लगभग सबैलाई मान्य कार्ड लिङ्क गरिएको बैंक खाता छ। क्रेडिट छैन, सामान्य रूप - डेबिट। तपाईं पत्ता लगाउन जसमा तपाईं खाता खोल्न बैंक संग के भर्ने आफ्नो शहर मा सहयोग गर्न आवश्यक छ। तपाईं यो कार्ड भुक्तान गर्दा तपाईं कुनै पनि छूट वा बोनस प्राप्त।
क्रेडिट - तपाईं सिर्फ मामला मा दोस्रो कार्ड बनाउन सक्छ। बस त्यो एक थियो सुनिश्चित अनुग्रह अवधि (100 दिन)। यो समयमा, तपाईं कुनै पनि चासो बिना बैंक ऋण लिन सक्छ। र तपाईं डिजेल इन्धन वा पेट्रोल कसरी सुरक्षित गर्न पैसा मुख्य नक्सामा सकिएमा भने चिन्ता पर्दैन। क्रेडिट - तपाईं सधैं स्पेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं कसरी डिजेल इन्धन मा सुरक्षित गर्न सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने, राती ग्याँस स्टेशन द्वारा रोक्न प्रयास गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई केही मा, 237डिजेल मा घन्टा देखि 5% छुट प्रदान। यो पनि नियमित पेट्रोल लागू हुन्छ। तर यो कार्य सबै पेट्रोल स्टेशन मा उपलब्ध छ, त्यसैले साइटमा जानकारी जाँच गर्न निश्चित हुन।
अब तपाईं कसरी कार मा इन्धन बचत गर्न थाहा छ। अन्तमा हामी सबै भन्दा पाठकहरूलाई मुर्ख जस्तो लाग्न सक्छ कि एक टिप दिन। पेट्रोल मा सुरक्षित गर्न - सबै वा मात्र आवश्यकता को मामला मा ड्राइव छैन। यो तपाईं पाङ्ग्रा, कम खर्च पछि कम। उदाहरणका लागि, केही सय मात्र दुई मीटर छ जो स्टोर, मा रोटी किन्न जानुहोस्। यो तपाईं खुट्टा मा यो दूरी हटाउन भने, स्वास्थ्य गर्न धेरै आर्थिक र लाभदायक हुनेछ।
हाइब्रिड कैडिलैक Escalade: जब बुरा फाइदा भन्दा बढी
अगाडि सफारी 500: बाटोमा सजिलो
InstaForex: समीक्षा। InstaForex: पेशेवरों र कम्पनी को बुरा
प्रकाश कवच ( "Skyrim"): कहाँ यसलाई प्राप्त र के लगाउने सबै भन्दा राम्रो छ, जो?
Alena Babenko - Filmography, जीवनी, परिवार
पीलिया: वयस्क, कारण र प्रकार मा लक्षण। पीलिया कस्तो व्यवहार गर्ने?
कम भोल्टेज प्रणाली: डिजाइन, लेआउट र मर्मतका
मिन्स्क राजमार्ग: इतिहास, निर्माण, वर्तमान स्थिति
रूस मा एक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त लागि नयाँ नियम। एक ड्राइभिङ लाइसेन्स लागि परीक्षा उत्तीर्ण लागि नयाँ नियम प्रकाशित